စျေးပေါသော SBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါသော SBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း
နေအိမ် > စျေးပေါသော SBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါတဲ့ SBB ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် SBB ခရီးသွားလာစျေးနှုန်း နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် SBB
2. SBB အကြောင်း 3. စျေးပေါသော SBB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း
4. SBB လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့် SBB ရထားစီးတာပိုကောင်းသလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, နေ့ရက်, နှင့် SBB အပေါ် Supersaver 7. SBB subscription ရှိလား
8. SBB ၏မထွက်ခွာမီမည်မျှကြာမည်နည်း 9. SBB ရထားဇယားကဘာလဲ
10. ဘယ်ဘူတာကို SBB မှတာဝန်ယူသည် 11. SBB မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် SBB
အဆိုပါ ဆွစ်ဖက်ဒရယ်မီးရထား, SBB, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လည်ပတ်သောအမျိုးသားရထားလမ်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်.
SBB ရထားများသည်ဥရောပရှိအမျိုးသားရထားလမ်းများထိပ်တွင်ရှိသည်, နှင့် 2017 သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး၏ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ခဲ့သည်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်, နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်း.
25 လူသန်းပေါင်းများစွာသည် SBB မှနေ့စဉ်ခရီးသွားလာသည်.
SBB ရထားဝန်ဆောင်မှုများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးရထားဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်, လျော့နည်းနှင့်အတူ3ပျမ်းမျှအားဖြင့်မိနစ်ခန့်နှောင့်နှေးသည်.
အရှည်ဆုံး SBB ရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, အဆိုပါ Gotthard အခြေစိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ထဲမှာ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, အစီအမံ 57.1 ကီလိုမီတာနှင့်ကမ္ဘာ့စံချိန်သတ်မှတ်.
SBB ရှိပါတယ်3တရားဝင်ဘာသာစကားများ: ဂျာမန်, ပြင်သစ်, နှင့်အီတလီ. ထိုကွောငျ့, SBB ရထားဘူတာများကိုနေရာဒေသအလိုက်မှတ်သားပြီးမှတ်သားသည်: ဘာသာစကားနှစ်မျိုးရှိသောမြို့များရှိဘူတာများ၏အမည်များနှင့်သင်္ကေတများသည်ဒေသခံဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ဖြစ်သည်, ပြီးတော့ဘာလို့အဲလိုနာမည်မျိုးကိုတစ်ခါတစ်ရံတွေ့နိုင်တာလဲ SBB CFF FFS.
National Swiss SBB ရထားလမ်းကုမ္ပဏီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လည်ပတ်သည်, နှင့် 798 မီးရထားဘူတာ, နှင့် 721 လက်မှတ်အရောင်းဆိုင်များကိုလေ့ကျင့်ပါ. SBB ရထားလမ်းကုမ္ပဏီသည်အစိုးရပိုင်ဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်သည်, 1999, ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ရရှိထားသူဆိုလိုတာက 100% ရှယ်ယာများ.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ SBB အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်
စျေးပေါသော SBB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း
ဂဏန်း 1: သင်၏ SBB လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ရယူပါ
SBB ရထားလက်မှတ်တွေ အွန်လိုင်းမှရရှိနိုင်သည် 60 သင့်ခရီးသွားလာသည့်ရက်မတိုင်မီရက်ပေါင်း. သင်ကြိုတင်အချိန်ရထားလက်မှတ်တွေအမှာလိုက်တဲ့အခါ, သင်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်ရပြီးအသက်သာဆုံး SBB ရထားလက်မှတ်ကတော့အရမ်းကန့်သတ်ထားတယ်. ထို့အပွငျ, သင်၏ခရီးသွားလာချိန်နီးလာသည်နှင့်အမျှ SBB ရထားလက်မှတ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်, ဒါနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ SBB ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေစုဆောင်းပါ, သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုကြိုတင်ယူထားပါ. SBB ရထားလက်မှတ်ပေါ်တွင်ငွေစုရန်, သင့်လက်မှတ်ကိုစောစောဝယ်ပါ.
ဂဏန်း 2: အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း SBB မှခရီးသွားခြင်း
SBB ရထားလက်မှတ်တွေက အဆိုပါ Off- အထွတ်အထိပ်ကာလ၌စျေးနှုန်းချိုသာ, တစ်ပတ်၏အစမှာ, နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. သင်ရရန်သေချာပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း. အင်္ဂါနေ့မှာ, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, SBB ရထားလက်မှတ်သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်. သောကြောင့်၏အသံအတိုးအကျယ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက် နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခရီးသည်, ရထားလက်မှတ်တွေကပိုကုန်ကျတယ်. ထို့ကြောင့်, မွန်းတည့်ချိန်နှင့်ညနေခင်းအကြားအချိန်မရွေးသွားရန်ဝေးသည်. တနင်္ဂနွေသည်ရထားများအတွက်အခြားအထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့များတွင်ဖြစ်သည်. SBB ရထားလက်မှတ်ဈေးနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လာသည် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ.
ဂဏန်း 3: သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ကိုသေချာစွာသိပါက SBB အတွက်သင်၏လက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
SBB ရထား မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်သာ2ယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်အခြားရထားလမ်းကုမ္ပဏီများသည်, ၎င်းတို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်ရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးစီးပွါးရေးလက်မှတ်မဟုတ်ရင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းမယ်လို. သင်လက်မှတ်များကိုလူများအားရောင်းနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိနေသေးသော်လည်း, SBB အနေဖြင့်လက်မှတ် ၀ ယ်ခြင်းကိုလက်မှတ်ရောင်းရန်ခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ဂဏန်း 4: သင်၏ SBB လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
ရထားကိုသိမ်းဆည်းပါအကြီးဆုံးရှိသည်, အကောင်းဆုံး, နှင့်ဥရောပရထားလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအပေးအယူ. များစွာသောမီးရထားအော်ပရေတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှု, ရထားလက်မှတ်အရင်းအမြစ်များ, နှင့်နည်းပညာ algorithms ငါတို့၏အသိပညာကျွန်တော်တို့ကိုစျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်အရောင်းအမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး. SBB တစ်ခုတည်းအတွက်ရထားလက်မှတ်လက်မှတ်များဝယ်ယူရုံသာမဟုတ်ပါ; SBB မှအခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
SBB လက်မှတ်သည်ရထားတစ်စီးတည်းအတွက်ယူရို ၁၂.၅၀ မှယူရို ၁၂၅ အထိစတင်သည်. အဆိုပါ SBB ရထားလက်မှတ်၏စျေးနှုန်း မည်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်, ခရီးလမ်းဆုံး, သငျသညျခရီးသွားလာရန်ရွေးချယ်သောအခါ:
စံ € 12.50 – € 35 € ၂၈ – € 55
ပထမတန်း ယူရို ၅၀ – € 95 ယူရို ၅၀ – € 125
ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့် SBB ရထားစီးတာပိုကောင်းသလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
1) မင်းရောက် မြို့လယ်ခေါင်. ၎င်းသည်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SBB ရထား၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. SBB ရထားများနှင့်အားလုံး အခြားရထားခရီးသွားလာ မြို့၏မည်သည့်နေရာမှမဆို၊, ဒါကြောင့်တစ် ဦး လျှင်အရေးမထားဘူး သဘာဝအရံ သို့မဟုတ်ကျေးရွာ. လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိအချိန်အတော်အသင့်သက်သာစေတယ်. ရထားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, သင်သွားလိုသည့်မြို့၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်. သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ, ဂျီနီဗာ, ဘေဆယ်, ဇာမတ်, သို့မဟုတ်ဇူးရစ်, မြို့လယ်ခေါင်သည် SBB ရထား၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်!
2) လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးနှင်ရန်သင့်လေယာဉ်ချိန်မတိုင်မီအနည်းဆုံးနာရီပေါင်းများစွာလေဆိပ်သို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည်. လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကိုသင်လုပ်ရမည်. SBB ရထားနှင့်အတူ, သင်ရုံကြိုတင်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းဘူတာရုံမှာဖြစ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံပင်လျော့နည်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်. သင်အချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားသောအခါလေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရန်အချိန်ယူရသည်, သငျသညျ SBB ရထားစုစုပေါင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် ခရီးသွားအချိန်.
3) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, SBB ရထားလက်မှတ်၏စျေးနှုန်းသည်ဘတ်ဂျက်လေယာဉ်လက်မှတ်များထက် ပို၍ ကုန်ကျသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးစွဲချက်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, SBB ရထားလက်မှတ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းသဘောတူညီချက်ရှိသည်. ရထားစီးရန်မလိုသောခရီးဆောင်အိတ်များကဲ့သို့အခြားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူ, SBB အားဖြင့်ခရီးသွားလာ အကောင်းဆုံး.
4) ရထားများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်. ရထားနှင့်လေယာဉ်ပျံအကြားနှိုင်းယှဉ်ပါ, ရထားအမြဲထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်. လေယာဉ်ပျံများသည်ကမ္ဘာမြေကိုအကြီးအကျယ်ကာဗွန်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ထုတ်လွှတ်သည်. နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ရထား အများကြီးလျော့နည်းကာဗွန်ခြေရာ လေယာဉ်ထက်.
Thusis ရထားစျေးနှုန်းမှ Chur
Zurich မှ Chur ရထားစျေးနှုန်း
ဂျီနီဗာ Chur ရထားစျေးနှုန်း
Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, နေ့ရက်, Saver နေ့ Pass, နှင့် SBB အပေါ် Supersaver?
SBB တွင်ဘတ်ဂျက်အမျိုးမျိုးနှင့်ခရီးသွားအမျိုးအစားများအတွက်လက်မှတ်အမျိုးအစားများရှိသည်: ဒါကြောင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပန်းဖြေခြင်းရှိမရှိ. ဒီလက်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုကသင့်တော်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်.
Standard SBB လက်မှတ်များ:
အဆိုပါ SBB စံလက်မှတ် SBB လက်မှတ်အားလုံး၏အပြောင်းလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်. ဒီရထားလက်မှတ်က Point-to-Point အတွက်ဖြစ်တယ် 1 လမ်းသို့မဟုတ် roundtrips. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, SBB စံလက်မှတ်သည်ခရီးသွားကဒ်ပြားဖြစ်သည်. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဤရထားလက်မှတ်သည်သင်ဝယ်ယူချိန်တွင်သင်ရွေးချယ်သောတစ်နေ့လုံးအတွက်ဖြစ်သည်, နှင့်အထိ5နောက်နေ့ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ပထမနှင့်ဒုတိယတန်းများအတွက် SBB point-to-point လက်မှတ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်. ထိုအချက်မှအခြားအချက်များ၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာကလေးများသည်အသက်မပြည့်မှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်6အခမဲ့ခရီးသွားလာ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်ဆန္ဒရှိသည့်နေရာနှင့်မည်သည့်စာသင်ခန်းကိုမဆိုသင်သွားနိုင်သည်, A ကနေ B ကိုရန်သင့်ခရီးအပေါ်.
SBB Day Pass နှင့် Saver Day Pass လက်မှတ်တွေ:
Saver Day Pass ခရီးသွားကဒ်နှင့်အတူ, ခရီးတစ်ခေါက်လျှင် ၂၇ ဒေါ်လာလောက်သာပေးရမယ်. Day Pass လက်မှတ်ကိုကြိုတင်ရယူထားမှသာရနိုင်သည်, သူတို့ရထားဘူတာမှာမရနိုင်ဘူး, အဖြစ်အစောပိုင်း 60 သင်၏ထွက်ခွာသွားသည့်ရက်မတိုင်မှီရက်ပေါင်း. သင်သည်ဤရထားလက်မှတ်အမျိုးအစားကိုခရီးမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်မှာနိုင်သည်. ထို့အပြင်, Saver Day Pass လက်မှတ်သည်လှေများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်သည်, ဘတ်စ်ကား, သို့မဟုတ်လမ်းရထား.
SBB Supersaver လက်မှတ်တွေ:
ဒီလက်မှတ်လူတန်းစားဟာ Standard SBB ရထားလက်မှတ်လိုမျိုးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်အခြားရထားလက်မှတ်တွေထက်စျေးနှုန်းချိုသာ. Supersaver SBB လက်မှတ်သည်ရနိုင်သည် 70% စံလက်မှတ်တွေအပေါ်လျှော့စျေး. ပုံမှန်ရထားလက်မှတ်နှင့်မတူဘဲ, ဤအမျိုးအစားသည် A မှ B သို့ခရီးသွားရာတွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းကိုပေးသည်. အဓိပ္ပါယ်, မည်သည့်ဘူတာတွင်မဆိုသင်ခလုပ်ခေါက်။ မရနိုင်ပါ, ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသောဘူတာများ မှလွဲ၍ ကျန်.
Day Pass ခရီးသွားကဒ်သည်သင်ခရီးသွားသည့်နေ့တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်မရွေးခရီးသွားနိုင်သည်, ထွက်ခွာသွားသည့်ရက်စွဲတွင်.
SBB subscription ရှိလား?
ဒေသန္တရနိုင်ငံသားများသာ GA ခရီးသွားကဒ်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်, အရာအားလုံးအဘို့အအခြေခံအားဖြင့်တကဒ်ဖြစ်ပါတယ်. GA ခရီးသွားကဒ်သည်တရားဝင်သည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံး ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏.
သင်အဲဒါကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်:
– SBB လက်မှတ်ကောင်တာ.
– SBB ဒေသခံဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနတွင် 848 44 66 88
– SBB ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိဝန်ထမ်းများမှ.
Familia GA ခရီးသွားကတ်
ကလေးများနှင့်အသက်အရွယ်သည်အထိလူကြီးများ 16 နှင့်သူတို့၏မိဘများက Familia GA ခရီးသွားကတ်ပြားတွင်အထူးလျှော့စျေးကိုခံစားနိုင်သည်. အနည်းဆုံးမိသားစုဝင်အနည်းဆုံး SBB Travel Card ရှိပါကဤကဒ်ကိုရနိုင်သည်.
Familia GA ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူအားလုံးသည်အခြား GA ခရီးသွားကတ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာကျဆင်းကြသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ပထမသို့မဟုတ်ဒုတိယတန်းအတွက် Familia GA ကို ၀ ယ်ယူလိုသည်ကိုမိသားစုကဆုံးဖြတ်နိုင်သည်.
သငျသညျတဲ့အခါ 25 ဒါဟာအားလုံးပျော်စရာရှိခြင်းအကြောင်းကိုပါပဲ, ယခုတစ်ခုနစျပါး25ကဒ်နှင့်အတူ, သင်ကနေန့်အသတ်ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်7ညနေ. အဓိပ္ပါယ်, ဒီခရီးသွားကဒ်သည်တရားဝင်သည်7ညနေ5နံနက်. ဒါကြောင့်, ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? ခုနစျပါး 2525 ကိုသင်၏ဆွစ် Pass Pass ခရီးသွားကဒ်ပြားတွင်ထည့်ပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်.
ဂျီနီဗာ Zermatt ရထားစျေးနှုန်း
Zermatt ရထားစျေးနှုန်းမှ Bern
Lucerne မှ Zermatt ရထားစျေးနှုန်းများ
သင်၏ SBB ကိုရရန်နှင့်အချိန်မှန်ဖြစ်ရန်, သင်အနည်းဆုံးရောက်ရှိရန်ရထားလမ်းကအကြံပြုသည် 1 သင်၏ SBB ရထားမထွက်ခွာမီတစ်နာရီ. ကျွန်ုပ်တို့သည် SBB ၏ရထားများပေါ်တွင်ခရီးများစွာသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် Save A Train တွင်ရှိသည်, ပင်ရောက်ရှိရန်အကြံပြုပါသည် 30 ကြိုတင်မိနစ်အနည်းငယ်, ဒါကြောင့်သင်ရထားကိုဖမ်းရန်ကြီးမားသောဘူတာရုံများသို့အလျင်အမြန်မသွားရန်လိုသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, တစ်နာရီသည်ဆိုင်များနှင့်အစားအစာဆိုင်များနှင့်သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုရရှိရန်အတွက်လုံလောက်သောအချိန်ဖြစ်သည် တတ်နိုင်သမျှချောမွေ့ဖြစ်ရထားခရီး.
Save A Train ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေနိုင်သည်. သင်၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်လိုချင်သောနေရာကိုသာရိုက်ထည့်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုရထားအချိန်ဇယားများအတွက် updated သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသလိမ့်မယ်.
ဘယ်ဘူတာကို SBB မှတာဝန်ယူသည်?
ကျော်ပါပြီ 10 SBB ရထားဝန်ဆောင်မှုများမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူတာ.
SBB ၏ Zurich ဘူတာသည် Zurich Central Station (ဒေသခံအမည် Zurich HB ဖြစ်ပါတယ်). ၎င်းသည် Zurich ရှိအကြီးဆုံး SBB ရထားဘူတာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Zurich ၏ဗဟိုချက်တွင်တည်ရှိသည်, အနား Limmat မြစ်.
Bern သည်ဆွစ်ဇာလန်၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး Langgasse ရပ်ကွက်ရှိ Bern တက္ကသိုလ်နှင့်အနီးဆုံးရထားဘူတာဖြစ်သည်.
ယနေ့ခေတ်ဂျီနီဗာ၌ SBB ရထား ထွက်ခွာခြင်းနှင့်ဂျီနီဗာဗဟိုဘူတာမှရောက်ရှိလာ, မြို့လယ်အလယ်၌တည်၏.
ဘေဆယ် SBB ဘူတာသည်ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးနယ်စပ်ဒေသဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာဆွစ်ဇာလန်မှ, ဂျာမနီကိုသွားနိုင်တယ်, ပြင်သစ်, သြစတြီးယား, SBB မီးရထားနှင့်အတူနယ်သာလန်နှင့်. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ရှိပါတယ် 50 Basel station ရှိစတိုးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ, သင်ခရီးစဉ်အတွက်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးအတွက်စျေးဝယ်နိုင်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျမုန်နှင့်နောက်ဆုံးမိနစ်အမှတ်တရပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. ဘေဆယ် SBB ဘူတာမှ, ပြီးတော့သင်သွားနိုင်တဲ့အဓိကဘူတာတွေက Frankfurt ပါ, ပဲရစ်, နှင့် Salzburg.
စက်ဘီးစီးခွင့် SBB ရထားများ?
SBB ရထားများပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခွင့်ပြုသည်. သူတို့ကိုဘူတာရုံမှာသွားဝယ်လို့ရပါတယ်, စက်ဘီးကိုအိတ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါသို့မဟုတ်လက်ဆွဲအိတ်အဖြစ်ရထားသို့သယ်ဆောင်ပါ.
ကလေးများသည် SBB ရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့ခရီးသွားပါစေ?
ဟုတ်တယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာပါ, အသက် (၆) နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, အသက်ခြောက်နှစ်မှကလေးများ, နှင့်၎င်းတို့၏အထိ 16 ထက်ဝက်စျေးများအတွက်မွေးနေ့ခရီး.
ဟုတ်ကဲ့, ခွေးများသည်ခရီးသည်သေတ္တာ (သို့) ခရီးဆောင်ဗင်ကားဖြင့်ခရီးသွားနေသမျှကာလပတ်လုံးခွေးများကိုခွင့်ပြုထားသည်.
အနည်းဆုံးဘူတာသို့ရောက်သင့်သည် 1 သင်၏ရထားထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီတစ်နာရီ, နှင့်လက်မှတ်ကိုစစ်ဆေးရန်လက်မှတ်စစ်ဆေးရေးမှူးကိုပြပါ.
တောင်းဆိုထားသော SBB မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – SBB မှာထိုင်ခုံကြိုကြိုတင်ယူထားလို့ရပါသလား?
သငျသညျ လုပ်နိုင် ရထားပေါ်တွင်သိုထားပါ တစ်ဦး ငါသိတယ်တွင် ကြိုတင်ပြီး အထိ5ထိုင်ခုံလျှင်€5၏စျေးနှုန်းမှာခရီးသည်. သို့သျောလညျး, ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းသည်ခရီးသွားနေသောလူတစ် ဦး ၏အမည်အောက်တွင်ရှိရမည်.
SBB တွင် Wi-Fi ဝန်ဆောင်မှုရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့. သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် အခမဲ့ ဝိုင်ဖိုင် အားလုံး SBB ရထားပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှု တက်အထိအားလုံးခရီးသွားအတန်း 60 မိနစ်များ.
သင်ဤအချက်မှဖတ်ပြီးပါပြီ, သင်၏ SBB ရထားများအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုသင်သိပြီးသင်၏ SBB ရထားလက်မှတ်ကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည် တစ်ဦးကရထား Save.
NSB Vy နော်ဝေး
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သင် / de သို့ / nl သို့ / / fr နှင့်အခြားဘာသာစကားများပြောင်းနိုင်သည်.